Lubnaan oo kaarayaal badanku gurtay Badda | Berberanews.com
Home WARARKA Lubnaan oo kaarayaal badanku gurtay Badda
Lubnaan oo kaarayaal badanku gurtay Badda
Waa suurto gal in ay wax lala yaabo kugu noqoto in dadka ka shaqeeya daryeelka deegaanku ay go’aansadaan in 10 kaare lagu rido badda si wax looga qabto xashiishka tuulan magaalada ay ku nool yihiihiin.
“Waxay halkani noqon doontaa seere ay ka helaan dadka quusa, waxa kale oo ay noqonaysaa meel kalluunku ku tarmo” ayuu yidhi Kaamil Kosbaar, oo ka mid ah ururka daryeeleyaasha xeebta Saydaa oo wakaaladda AFP la hadlay.
Waxa aanu ku rajo waynyahay in dhirta biyaha ka dhex baxda ee badda gunteeda ku taal si dhakhso ah u qarin doonto kaarayaashaas, taas oo suurto gelin doonta yoolka ururkooda ah oo in uu samaysmo “seere badda gunteeda ku yaal” oo noqon doona mid ka duwan muuqaalka xeebaha Lubnaan ee xashiishku ka buuxo.
Sida uu sheegay Kosbaar na waxa sidaa loo yeelay “si loo muujiyo diir naxa loo qabo Falastiiniyiinta”.
Previous articleBaarlamaanka Somaliland oo ansixiyay Xeer u gaar ah Kufsiga
Next articleSomaliland oo sammaysay qorshe siyaasadeed lagu xakamaynayo shiidaalka dalka la keeno